Nhau - Iko kushandiswa kwekukurumidza lime
QUICKLIME inogadzirwa kubva kumatombo ane musanganiswa wecalcium uye magnesium carbonates.
Ose akakwirisa calcium quicklime uye dolomitic quicklime zvinogadzirwa nekupisa mbichana mbichana demo mumoto kusvika kumatembiricha emadhigirii mazana mapfumbamwe. Maitiro aya anonzi maitiro ekuverenga.
Izvo zvinokurumidza zvigadzirwa zvinowanzo gayiwa kuita simba rakanaka rinodaidzwa sePULVERIZED QUICKLIME iyo yakanakira kusanganisa nemishonga yekuwedzera kana zvimwe zvigadzirwa kuti igone mune yakasanganiswa yakasanganiswa michina. Nekuda kwehunhu hwemakemikari hwezvimwe zvinowedzera, iyo inokurumidza inogona kuve "Fluidized", ndiko kuti, kuve nehunhu hwekuve wakanyanya kuyerera. Iyo yakakurumidzirwa quicklime yakanakira kushandiswa neakasarudzika ekugadzirisa zvinhu masisitimu ekunyatso kuyerera kuyerera uye kudzivirira kuvhara.
Quicklime inogona zvakare kudirwa mvura, mune imwe nzira inowanzozivikanwa sekutsvedza, zvichikonzera HYDRATED QUICKLIME (kana calcium hydroxide), yakaoma yakaoma inoyerera poda chigadzirwa icho chinoshanda uye chinoshanda kune akawanda mashandisiro.
Iyo zvakare inogona kushandiswa se analytics reagents, spectral ongororo reagent, phosphor mashini. Anobatsira solvent, oiri yemafuta ekushambadza vamiririri, gasi ongororo, inoshandiswa pane kabhoni dhayokisaidhi. Roti reagents anoshandiswa mune semiconductor kugadzirwa kwedenotation, uye dhizaini maitiro.
1) Shandisa mune yega yega mhando yechikafu chinowedzera chinowedzerwa calcareous huwandu hunosvika makumi mashanu neshanu nematanhatu pamusoro kwete zvinopesana nzvimbo
2) Iine inoita kuti mapurasitiki arime, fekitori yerabha, fekitori yekumhara, isina mvura chitoro depo mbishi zvinhu uye mukati nekunze madziro machena. Albedo pamusoro pe 85 degrees.
3) Zvishandiso mukugadzira mabhureki bhodhi, inowira mumvura pombi, indasitiri yemakemikari. Albedo pamusoro pemadhigirii makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe.
4) Inogona kushandisa mumushonga wemazino unamate muviri, sipo. Albedo mune 94 degree pamusoro
5) Zvishandiso murabha, ipurasitiki, tambo yemagetsi, iyo pvc albedo mu94 degree pamusoro peiyo
6) Pvc, PE, iyo pendi, iyo yekumhara nhanho chigadzirwa, iyo papermaking yepasi inopararira, iyo pepermaking pamusoro inopararira, albedo pamusoro pe95 degrees. Ine, iyo yakakwira albedo, isina-chepfu, iyo odourlessness, iyo yakatetepa mafuta zvinhu kuti ive yakaderera yakakwira-kuchena, degree reukukutu rakaderera.
Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Kugadzira Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Equipment, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira,